Iiapps zabantwana ukuba bafunde iJografi yaseYurophu | Oomama Namhlanje
UMaria Jose Almiron | 13/05/2021 22:00 | ekufundeni
Ukufunda iJografi namhlanje kunokuba mnandi kakhulu. Ndikhumbula ndisengumntwana, ukuba utitshala wandinyanzela ukuba ndithenge imephu yezopolitiko, imvelaphi eluhlaza okwesibhakabhaka elwandle, emhlophe kumazwe. Imigca emnyama eshinyeneyo eyahlula imida. Siza kupenda ilizwe ngalinye ngombala omakishayo ohlukileyo kwaye siwankqobe amazwe ngokuphindaphindiweyo ngokuvakalayo. Yimbali yakudala leyo. Namhlanje kukho uluhlu lwe iiapps zabantwana ukuba bafunde iJografi yaseYurophu kunye nehlabathi ngendlela emnandi!
Kuyamangalisa ukuzibona zizisebenzisa kwaye zifumanisa ukuba ziyadlala kwaye ziyonwabisa xa zisebenzisa ezi zixhobo zobuchwepheshe. Ngapha koko, fumana ukuba babandakanya ulwazi lwejografi ngaphandle kokuyiqaphela. Ziyacetyiswa zizikolo ezisebenza kunye nemeko ebonakalayo ngenxa yokuba iziphumo ezilungileyo ze Usetyenziso lwejografi lwabantwana.
1 Funda iJografi ngokudlala
2 Imidlalo yeJografi ekwi-Intanethi
3 Iiapps zokuzonwabisa zabantwana
Funda iJografi ngokudlala
Mhlawumbi itanki enkulu yejografi yedijithali ayikho enye ngaphandle kweGoogle Earth, kunye nomntakwabo omncinci ekubambeni, umlingo weSitalato sikaGoogle. Ukuba yintoni malunga nokuba abantwana bafunda ukwazi umhlaba, akukho nto ilunge ngaphezu kwesi sixhobo ukuze bafumane umhlaba wonke. Ngenye yeetanki ezinkulu xa kuziwa kuyo usetyenziso lwabantwana lokufunda iJografi yaseYurophu kunye nehlabathi.
Yiya nje kuGoogle Earth ukuze ufumane inqaku kwimephu, ilitye lesikhumbuzo, indawo kwaye ucofe kulungile. Ke imephu yehlabathi ihanjiswa ngomzuzwana ukuya kwindawo ebonisiweyo, kunye nethuba lokuhamba ngemitha nganye yesikwere ngokusondeza. Ngayo, abantwana banokundwendwela i-Eiffel Tower kwaye bafumane umbono opholileyo weSeine neParis. Okanye ufumane ubungakanani boDonga lwaseTshayina kunye neephiramidi zase-Egypt.
Kule nto yongezwa kuGoogle Street View, enye indawo efanelekileyo yokujonga ubume bejografi yaseYurophu kunye nehlabathi. Kule meko, ngoncedo lokuba usetyenziso luwindow kwizitrato zehlabathi. Ungahamba nganye yazo njengemephu okanye ngemifanekiso yesathelayithi.
Imidlalo yeJografi ekwi-Intanethi
Kodwa ukuba kungokufunda iJografi kunye neeapps ezonwabisayo, enye yeempumelelo ezinkulu zangoku yimidlalo yeJografi yeHlabathi. Esi sixhobo senziwe ngothotho lwemidlalo yemephu ekufuneka bayigqibile abantwana. Imidlalo iqulathe iiphazili ezinemibala ezimema ukuba zigqitywe ngexesha kunye nokwenza elonaqondo liphoso linokubakho. Yi app yabantwana ukuba bafunde iJografi yaseYurophu, IMelika kunye namanye amazwekazi. Kwakhona ukufumana iiflegi kunye namaphondo amazwe ahlukeneyo ehlabathi.
IGeomaster Plus lolunye ukhetho kwi usetyenziso lwabantwana lokufunda iJografi yaseYurophu kunye nehlabathi. Esi sixhobo sixuba imidlalo neemephu ezisebenzayo. Ikuvumela ukuba ufumane iingqukuva nezixeko kwimephu yehlabathi kwaye kukwakho nolwazi ngeeflegi ukongeza ekubeni neatlasi.
Iiapps zokuzonwabisa zabantwana
I-Seterra nayo ikuluhlu lwe usetyenziso lwabantwana lokufunda iJografi yaseYurophu kunye nehlabathi. Ngumdlalo wejografi omnandi ofumaneka ngeelwimi ezingaphezu kwama-40. Ivumela ukufikelela kwimibuzo engaphezulu kwama-400 eyenziwe ngokwezifiso malunga namazwe, iintloko, iiflegi, iilwandle, amachibi kunye nokunye.
Enye into nguGeoguessr. Ngumdlalo okwi-intanethi okumema ukuba ufumane inqaku kwimephu kwikhathalogu ye-360º yemifanekiso ebanzi evela kuGoogle Street View. Umdlali unikwa indawo engaqhelekanga eMhlabeni emva koko kufuneka afumanise ukuba yeyiphi eyona ndawo ikwimephu ecekeceke.
Ukhuphiswano lweeNqununu ngu app onokuzikhuphelela abantwana ukuba bafunde iJografi yaseYurophu kunye nehlabathi, nangona kule meko kugxile kumakomkhulu. Inamanqanaba amahlanu obunzima ke iyaqhelana nobudala obahlukeneyo. Kule meko, abadlali banexesha elithile lokuphendula imibuzo ngokuchanekileyo, batsala umdla wabantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-25 emhlabeni.
Ezona nkqubo zilungileyo zesiNgesi zabantwana
Uyabona ukuba kukho iindlela ezininzi zokufunda iJografi ngokudlala kwaye ngendlela emnandi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » ekufundeni » Iapps ezi-6 zabantwana zokufunda iJografi yaseYurophu